Ilaa 700 Xaaji oo geeriyootay Makka Almukarama – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
24th September 2015 MAREEG Af Soomaali 0
irada dadka waxyeeladu ka soo gaartay isbuurasho ka dhacday magaalada Makka ayaa marba marka ka sii dambeysa sii kordheysa waxana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ay tirada dhimasha ay kor u dhaaftay 700 oo ruux, halka dhaawacauna uu ku dhow yahay kun ruux.
Sida ay sheegayaan mas’uuliyiinta boqortoyada Sacudi Carabiya isbuurashadan ayaa waxaa ku dhaawacantay in ku dhow kun xujay ah iyadoo shilkan uu ka dhacay inta u dhexeysa buurta Carafa iyo Masjidka Xaramka.
Horaantii bishan ayaa wiish ku soo dumay masjidka xaramka waxaa ku dhintey 109 ruux halka ay afar boqol ku dhaawacmeen.
Madaxa guddiga dhexe ee Xajka Amiir Khaled al-Faisal, ayaa ku eedeeyay is buurashada qaar kamid ah xujay u dhashay wadamada Afrika sida uu shaaciyay taleefishinka Alcarabiya. Illaa iyo afar kun oo shaqaale ah iyo 220 gaadiidka Ambalaaska loo yaqaan ayaa ka qeybgalay gurmad loo fidinayay dadka wax ku noqday isbuurashada.
Lama oga illaa iyo hadda dadka ku dhintey isbuurashadan in ay ku jiraan dad Soomali ah iyo inkale